ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကမ်းလင့်မယ့်လက်များ
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေအဖြစ် တီးခတ်ဖျော်ဖြေသီဆိုထားသော ကမ်းလင့်မယ့်လက်များ သီချင်းခွေ ထွက်ရှိလာပါပြီရှင် .. ။ အဆိုတော်ကောင်းများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေထားသော ဤရန်ပုံငွေအခွေကို ၀ယ်ယူအားပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကမ်းလင့်မယ့်လက်များ သီချင်း Video ကို ဤနေရာမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 5:15 PM
Labels: Strongly Suggestion
((ငါတို့ ခေတ်မှာ ကွန်မြူနစ်စံနစ်လိုလားတဲ့ ပုတင်ရုရှားအစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြတ်ထုတ်နေမှုနှင့် သြဇာအာဏာလုံးဝကျဆုံးစေရမည်။ ။)) ငှက္ကထကြီးမိုးသီးဇွန် ရဲ့
လေလုံးကြီးကတော့ ကြောက်စရာကြီးပါလာနော်...ဒါနဲ့ ဘယ်လိုများတိုက်မှာလဲဗျ.. (ကျနော်တို့ ဇိမ်ခံ တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်။ကျနော်တို့ကို လိုအပ်တဲ့ငွေနဲ့အထောက်အပံ့တွေကူညီပါဆိုတာမျိုးနဲ့လားဗျ..) ဟီး ဟီး ဟီး ...
Where can i buy this CD at SG?
Ready to go back Lin Let?
Where can i buy it in US?
too bad it is in vcd version ;( .. I like to have it too.. but where to get it? They should release dvd version for tech geek customer ;)
ပန်နီဆူးလားမှာရှိတဲ့ မြန်မာဆိုင်တွေမှာ သွားကြည့်မှပဲ သိပါ့မယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်မလည်း မအားသေးတဲ့အတွက် သွားမမေးကြည့်ရသေးပါဘူးရှင်။ တွေ့ရင်အကြောင်းပြန်ပါ့မယ် :)
၈.၈.၈၈ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ (၂)
၈၈၈၈ နှစ်(၂၀) ပြည့် အောက်မေ့သတိရပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်...
8.8.88 20th Anniversary In Singapore